Saldhig Hal Milyan oo Dollar Ku Baxday oo Laga Hirgaliyay Bosaso [SAWIRRO] • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Saldhig Hal Milyan oo Dollar Ku Baxday oo Laga Hirgaliyay Bosaso [SAWIRRO]
Saldhig Hal Milyan oo Dollar Ku Baxday oo Laga Hirgaliyay Bosaso [SAWIRRO]
June 14, 2019 - By: HORSEED STAFF
Magaaladda Bosaso ee xarunta gobolka bari waxaa maanta si rasmi xariga looga jiray Saldhiga booliiska bartamaha magaaladda.
Saldhiga oo ka kooban labo dhisme oo labo dabaq ah waxaa xariga si wadajir ah uga jaray Wasiirka Amniga Puntland C/samad gallan, Wasiiru Dowlaha arrimaha gudaha Maxamed Axmed Kulan iyo Duqa magaaladda C/salaan Bashiir C/salaan.
Munaasabad kooban oo loo qaybtay furitaanka Saldhiga waxaa ka qaybgalay Guddoomiyaha gobolka bari Yuusuf Maxamed wacays dhado, taliyaha qaybta booliiska gobolka bari, Xeer ilaaliyaha maxkamada gobolka, Masuuliyiinta ka socday hay’adda SSF, Masuuliyiin ka socday shirkadda Jibcon oo dhistay Saldhiga, Nabadoono iyo marti sharaf kale oo tiro badan.
Dhammaan Masuuliyiintii ka hadashay munaasabada waxay tilmaameen in loo baahan yahay in mudnaanta saraynta sharciga iyo in la ilaaliyo saldhiga iyo agabka kale ee yaal, Waxay u mahadceliyeen dhammaan dadkii ka qaybqaatay inuu hirgalo saldhiga.
Saldhiga bartamaha Bosaso oo la dhisay xiligii gumaysiga Talyaaniga ayaa ah midka ugu weyn ee ku yaal magaaladda Bosaso. Dhismaha cusub ee maanta xariga laga jaray ayaa ka kooban labo dhismo oo Dabaqyo ah. Qaybta lagu xiro dadka loo haysto dambiyada iyo qaybta kale oo ah xafiisyo ay adeegsan doonaan booliiska.